पैसाबाट झन धेरै सर्छ भाइरस, पैसालाई सकेसम्म मुखको सम्पर्कमा लानुहुँदैन : डा. शेरबहादुर पुन - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका २९ फाल्गुन २०७६, 9:12 am
केही समय पहिले नयाँपत्रिकामा सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनको भनाइ ‘भाइरस सामान्यतया फ्लुका भाइरस नोटमा झन्डै १७ दिनसम्म जीवित रहन्छन्’ प्रकाशित गरिएको थियो ।
डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार नोटमा भएको भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सजिलै सर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । एन्फ्लुएन्जा भाइरस पैसाका माध्यमबाट सर्छ भन्ने पहिले नै पुष्टि भइसकेको उहाले बताउनु भएको थियो।